Thwebula Evernote 6.4.2.3788 – Windows – Vessoft
Evernote – isofthiwe ukudala bese uhlela amanothi. Isofthiwe mkhulu ukuba alobe ulwazi olufanele, ukuhlela izindaba uphinde ulungise izenzakalo ezahlukene. Evernote kwenza ukuba unamathisele izithombe, amathrekhi alalelwayo, skrini, amafayela PDF amanothi. Isofthiwe iqukethe izifanekiso esakhelwe ngaphakathi angasetshenziswa lapho kudalwa amanothi. Evernote ikuvumela ukusetha kuhlelwe izindaba izikhumbuzo. Evernote futhi uyakwazi ukuvumelanisa idatha igcinwa isitoreji ifu esinikeza ukufinyelela ulwazi olufanele kusuka kumadivayisi ezahlukene.
Kudala amanothi ezahlukene
izindaba kuhlelwe izikhumbuzo
Ukubethela of amanothi akhethiwe izindawo umbhalo
Ukuvumelanisa kumadivayisi ephathekayo
Amazwana on Evernote:
Evernote Ahlobene software:
abahleli Ithuluzi nokuzala imibono ehlukene noma imisebenzi ngendlela izifunda. Isofthiwe kwenza ukuvikela izifunda ngokumelene ukufinyelela okungagunyaziwe nge password.
English, Français, Español, Deutsch... FreeMind 1.1.0 futhi 1.0.1
abahleli Ithuluzi ukusebenza kanye amabalazwe ingqondo. Isofthiwe kwenza ukuba lelisu imibono izinhlelo in umbhalo format noma ngesimo izikimu.
-Internet Isiphequluli eligxile thwebula elula kokuqukethwe kwabezindaba. Isofthiwe iqukethe iqoqo amathuluzi ukulanda amafayela sesifufula, neminye imininingo kusuka kumasayithi ezahlukene.
Office I Kulula ukusebenzisa isofthiwe nge isethi enkulu amathuluzi kanye nokwesekwa ifomethi ifayela ethandwa ukuxazulula imisebenzi ehlukahlukene ehhovisi.
Chat The ukuthandwa client ukuzuza ukuxhumana engxoxweni. Isofthiwe iqoqo izici ezisetshenziswayo in the amanethiwekhi omphakathi.
English, Español, Deutsch, Português... Classic Shell 4.3
English, Français, Español, Português... Seaside Multi Skype Launcher 1.23